Pyidaungsu MM လက်ကွက် စာရိုက်နည်း – Myanmar Unicode® Migration
မြန်မာလက်ကွက် ဇယားသည် ဝင်းလက်ကွက် နှင့် အများအားဖြင့် ဆင်တူပါသည်။ မြန်မာယူနီကုဒ်သည် အက္ခရာတစ်ခုမှ ပုံသဏ္ဌာန် ကွဲပြားသော စာလုံးပုံ အမျိုးမျိုးကို ခလုတ်တခုတည်း (ကုဒ်တစ်ခုတည်း ) ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရရစ် ( အကြီး အသေး အပြတ် ) အမျိုးမျိုး မရှိပါ။ ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် ရရစ်တခုသာ တွေ့ရပါမည်။ ထို့အတူ တစ်ချောင်းငင် နှစ်ချောင်းငင် အရှည် ကိုလည်း တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတိုင်း ရိုက်နှိပ်သွားပါက လိုချင်သော စာလုံးပုံစံကို အလိုလျောက် ပြောင်းလဲ ပေးပါလိမ့်မည်။
၂။ ပါဠ်ဆင့် ( စာလုံးဆင့် )များ ရိုက်သွင်းနည်း
စာလုံးဆင့်များရိုက်နှိပ်လိုပါက အဆင့်ခလုတ် [ F ] shift +fကိုရိုက်နှိပ်ပြီး ဆင့်လိုသော အက္ခရာကို ဆက်ရိုက်လိုက်ပါက စာလုံးဆင့် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဋ္ဌ ဋ +်‌ + ဌ # + F‌ + X
ဏ္ဌ ဏ +်‌ + ဌ P + F‌ + X
ဍ္ဎ ဍ +်‌ + ဎ ! + F‌ + ~
ဏ္ဍ ဏ +်‌ + ဍ P + F‌ + !
၃။ မတူကွဲပြားသော အက္ခရာများ
သုည ‘၀’ [key ‘0’] နှင့် ဝလုံး ‘ဝ’ [key ‘W’] မတူပါ
စလုံးရပင့် ‘ဈ’ နှင့် ဇမြင်ဆွဲ ‘ဈ’ [key ‘Q’] မတူပါ
ညလေး ‘ဉ ‘ [key ‘N’] နှင့် အက္ခရာအု ‘ဥ’ [key ‘U’] မတူပါ
သရရစ် ‘သြ’ နှင့် အက္ခရာအော ‘ဩ’ [key ‘]’] မတူပါ
၄။ နမူနာပြ စာရိုက်နည်း
စာလုံးအချို့ကို နမူနာအဖြစ် အောက်ပါဇယားတွင် ရိုက်နှိပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ရရစ် အက္ခရာကို ဗျည်းနောက်မှ ရိုက်ရပါမည်။ို ၊ုံ ၊ံ့ ကဲ့သိုသော အပေါ်အောက် စာလုံးများကို နှစ်သက်ရာ အရင်ရိုက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များကို တမျိုးတည်း ဖြစ်စေရန် အလိုလျောက် ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကျောင်းေ+က+ျ+ာ+င+်+းa + u + s + m + i +f+ ;
ကျွမ်း က+ျ+ွ+ မ +်+uး + s + G + r +f+ ;
ကြီး က+ြ +ီ+uး + j + D + ;
ခြုံ ခ+ြ +ု+ံc + j + k + H
မြှင့် မ +ြ +ှ+ င +်+့r + j + S + i +f+h
ငြှိုး င +ြ +ှ+ိ+ု+းi + j + S +d+ k + ;
စက္ကူ စ + က +်+ က +ူp + u + F + u + l
လိမ္မော် လ +ိ+ မ +်+ေ + မ +ာ+်(သို့)
လ+ိ+ေ+ မ +်+ မ +ာ+်v +d+ r + F +a+ r + m + f(or)
အင်္ဂါ အ + င +်+်+ ဂ +ါt + i +f+ F + * + g
အင်္ကျီ အ + င +်+်+ က +ျ+ီt + i +f+ F + u + s + D
သင်္ဘော သ + င +်+်+ေ + ဘ +ာo + i +f+ F +a+b+ m
ဥက္ကဋ္ဌ ဥ + က +်+ က + ဋ +်+ ဌ O + u + F + u + # + F + X
ဂုဏဝုဍ္ဎိ ဂ +ု+ ဏ+ ဝ +ု+ ဍ +်+ ဎ +ိ* + k + P + W + k + ! + F + ~ + d
သဏ္ဌာန် သ + ဏ +်+ ဌ +ာ+ န +်o + P + F + X + m +e+ f
ဘဏ္ဍာ ဘ + ဏ +်+ ဍ +ာb + P + F + ! + m
ဣနြေ္ဒ ဣ + န +်+ေ + ဒ +ြ (သို့)
ဣ +ေ + န +်+ ဒ +ြ E +e+ F +a+ K + j (or)
ခြင်္သေ့ ခ +ြ + င +်+်+ေ + သ +့c + j + i +f+ F +a+ o + h
သိင်္ဂီ သ +ိ+ င +်+်+ ဂ +ီo +d+ i +f+ F + * + D
သင်္ဂြိုဟ် သ + င +်+်+ ဂ +ြ +ိ+ု+ ဟ +်o + i +f+ F + * + j +d+ k + [ + f
သင်္ချိင်း သ + င +်+်+ ခ +ျ+ိ+ င +်+းo + i +f+ F + c + s +d+ i + f;
ဓါတု (သို့) ဓာတု ဓ +ါ+ တ +ု(သို့) ဓ +ာ+ တ +ုL + g + w + k (or) L + m + w + k
ပုဏ္ဏေးမ ပ +ု+ ဏ +်+ေ + ဏ +း+ မ (သို့)
၅။ Myanmar3 Font အမှန်ဖော်ပြနိုင်ရန်
Microsoft Office 2016 ကိုသုံးစွဲရာတွင် Myanmar3 font အစား Pyidaungsu Font ကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Myanmar3 font ကိုမဖြစ်မနေ သုံးစွဲရမည်ဆိုပါက Ctrl+D နှိပ်ကာ Font Dialog ဖွင့်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ် သုံးစွဲမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်